Iphupha malunga ne-Epistaxis ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Abaninzi banokuyikhumbula ukususela ebuntwaneni. Ngequbuliso kodwa ngesiqhelo impumlo engenabungozi iphuma emva kwexesha elifutshane. Kwiimeko ezininzi, ukopha ngeempumlo kokokwenzakala okungenabungozi kwi-septum yangaphandle yempumlo; kunqabile, ukuphuma kweempumlo kusekwe ekwenzakaleni okunzulu, kwanokwenzakalisa ubomi.
Nakumaphupha ethu kunokwenzeka ukuba iimpumlo zethu zophe. Into egcinwe kukutolikwa kwephupha njengenkcazo yalo mfanekiso wephupha inokufunyanwa koku kulandelayo:
1 Uphawu lwephupha «ngeempumlo» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ngeempumlo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ngeempumlo» - ukutolika ngokomoya
Uphawu lwephupha «ngeempumlo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba umntu udibanisa imifanekiso yamaphupha "impumlo" kunye "negazi," iphupha eli liswele amandla okwexeshana kwaye lilandele ukuthanda kwalo. Ukopha ngeempumlo kubonisa ukuba amandla Ingqondo yesiqhelo yamaphupha ibuthathaka kwaye iyancipha. Intuition, i "hunch," mhlawumbi ilahlekile okwangoku, kwaye izigqibo kunye nezenzo zinzima ngakumbi.
Ukuphuma kweempumlo ephupheni, ngokunxulumene neminye imifanekiso kunye neemeko zamaphupha, kungabonisa isigaba sobomi sangoku apho iphupha ngokwenyani yegama "Ufumene impumlo". Mhlawumbi malunga nomphuphi ukoyisa kuye kwafuneka ayithathe, yona isemva kwakhe, nokuba ebengayiqapheli ngaphambili. Olu toliko lusebenza ikakhulu xa kukho isenzo sobundlobongela ephupheni, apho, umzekelo, omnye wabethwa kwaye ephethe impumlo eyophayo.
Ukuba impumlo yopha ngokungaqhelekanga el mundo yamaphupha, oku kunokuthetha ukuba a umthwalo onzima ikhona kwaye ukuphupha kulinde ixesha elide. Inokuba unikwe umsebenzi omninzi kwaye ngoku uyasokola ukuthi hayi kwaye uyavuma ukuba awukwazi ukuhlangabezana neemfuno. Kunokubakho ingxaki kumanani egunya, anje ngomphathi, apho iphupha liyakhathaza ngokweemvakalelo ukuze utshintshe into kwimeko yakho ngoncedo lwesizathu.
Ukuba igazi libaleka lingaphumi kwaye impumlo yempumlo ayinakunqandwa, uphawu lwephupha luhlala lubonisa ukumisa. ukuqonda lomntu ochaphazelekayo. Umphuphi akafuni ukuvuma ubunzulu bemvakalelo, nangona kunjalo, kuba esoyika ukuba sesichengeni kwaye abe sesichengeni. Umntu owoyikayo ukubonwa njengonobuntununtunu ngokugqithiseleyo angangqwabalala kwaye alindele okungaphezulu kokulungileyo kuye. Ukuphupha okunokwenzeka kulawulwa yintloko yakho, ke kunzima ukuba ubonise ubuntununtunu bakho, Iimvakalelo ukuyichaza ngokuzenzekelayo okanye ukusondela kwabanye abantu ngokuthe ngqo nangokuvulekileyo.
Uphawu lwephupha «ngeempumlo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukubonwa kwengqondo, ukuphupha kweempumlo zeempumlo kufanekisela ingcinga yephupha elivela kwindalo yakho. udeliwe iba. Ukuphupha kunokuziva ucinezelwe okanye ngokungathi uthintelwe ngumqobo.
Ngokubhekisele isini Iimpumlo zeempumlo zinokuba luphawu lwento enokwenzeka ilahleko yempilo kunye nenye yabasetyhini Yintlungu Veza ukuba ulahlekelwa liqabane lakho.
Ngoxinzelelo olukhulu kunye nokugcwala kakhulu kubomi bemihla ngemihla, impumlo eyophayo inokubonisa ukudinwa ngokwasemzimbeni okuphuphayo okutyesheleyo kude kube ngoku. Ulinda ixesha elide kakhulu, kwaye lelo lixesha elide. Ukuhlala usebenza ngaphandle kokuvumela ikhefu eliyimfuneko phakathi kunokuba lukhulu kakhulu iingxaki zempilo ukukhokhela. Ukuphuma kweempumlo kuthetha ukuba ukomelela kukabani kusongela "ukuphuma egazini", okuhamba kunye nokuphulukana nobomi bomntu.
Uphawu lwephupha «ngeempumlo» - ukutolika ngokomoya
Igazi lihamba kwimigca yobomi, kwaye xa kuphulukana negazi kunokuba kwinqanaba lokomoya ilahleko amandla obomi kufuneka athethe. La mandla aphuma emzimbeni ngeempumlo, eyona nto iphambili ebusweni bomntu. Uphawu lweempumlo ezinokuba negazi lunokuba lubizo ngokwasemoyeni. uthando y ukuqonda Kuthetha ukuba banceda umphuphi obuthathaka ukuba afumane amandla angaphakathi.